Hery Rajaonarimampianina : Miasa ho an’ny vahoaka sy ny firenena -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Miasa ho an’ny vahoaka sy ny firenena
10/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Notsenain’ny vahoaka marobe teny amin’ny distrikan’Atsimondrano, tao amin’ny kaomina Soalandy Ankadivoribe ny Filoha Hery Rajaonarimampianina omaly. Nanatanteraka fitsidihana sady nanolotra ilay fotodrafitrasa famokarana sy famatsiana rano fisotro madio tao amin’io kaomina io mantsy ny tenany niaraka tamin’ireo olom-panjakana maro, rehefa avy nitsidika ny tobim-pamokarana vaovao tetsy Mandroseza.
Tamin’izany indrindra no nanambarany tamin’ny mponin’Atsimondrano fa miasa ho an’ny vahoaka ny tenany, ary miasa ho an’ny firenena. Tsy vitan’izay ary nohamafisiny fa miasa haingana, manorina fotodrafitrasa mafy sy maharitra ary mipaka amin’ny vahoaka avy hatrany.
Nilaza ny Filoham-pirenena fa tafiditra ao anatin’ny foto-kevitry ny Fisandratana ny fanomezana rano fisotro madio ny vahoaka. “Ny fanomezana sy fananganana fotodrafitrasa, avy hatrany dia mipaka mivantana amin’ny vahoaka izany. Izay ihany no fanambintsika. Fantatry ny Filohan’ny Repoblika ny filàna sy ny marary ny vahoaka. Noho izany, miasa haingana ny Filoha ary azo tsapain-tanana izany. Miasa isika ho tombontsoan’ny vahoaka sy ny firenena”, hoy izy.
Nambarany mantsy fa tsy maintsy haparitaka ary hiitatra manerana an’i Madagasikara ny fananganana fotodrafitrasa famokarana sy famatsiana rano ho an’ny mponina. “Ny rano dia ilain’ny vahoaka iray manontolo. Noho izany, tsy maintsy hampifanarahana amin’ny isan’ny mponina hatrany ny tetikasa izay hotanterahina”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina nanoloana ireo vahoaka maroben’ny kaomina Soalandy Ankadivoribe.
Voalaza fa tsy mijanona amin’ireo eto an-drenivohitra ny asa fananganana fotodrafitrasa famokarana sy famatsiana rano fisotro madio fa misy ihany koa eny Avaradrano sy Talatamaty. Anisan’ny politika nentin’ny Fitondram-panjakana hoy izy, ny fiatrehana ny filan’ny mponina sy ny fanatsarana ny tolotra omena azy ireo.
Ankoatra izay, nambarany teny am-pamaranana fa mbola hisy ny tetikasa fananganana fotodrafitrasa lehibe eo amin’ny famokarana sy famatsiana rano fisotro madio any amin’ny faritra maro manerana an’i Madagasikara, izay hiarahana amin’ny Banky Eoropeanina momba ny fotodrafitrasa (BEI) sy ny Vondrona Eoropeanina (UE).